Waddada Hanti Wadaag ee degmada Warta Nabadda oo dib u dhis lagu sameynayo “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna duqa Muqdisho mudane Xasan Maxamed Xuseen “Muungaab” oo ay wehliyaan xubno ka tirsan Maamulka Gobolka, kan degmada Warta Nabadda iyo mas’uuliyiin kale ayaa maanta dhagax dhigay Waddada Hanti-wadaag, halkaasi oo dhawaan lagu sameyn doono dib u dhis.
Dib u dhiska waddadan oo isku xirta xarunta degmada iyo Isgoyska Geed-Jaceyl ayaa dib u dhiskeeda waxaa iska kaashanaya maamulka gobolka iyo hay’adda USAID oo Mareykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah, kaasi oo qeyb ka ah mashruuca Danguud.
Guddomiyaha Degmada Warta Nabadda Yasiin Nuur Ciise oo warbaahinta la hadlay ayaa ugu mahadcaliyay Maamulka Gobalka Benaadir hirgelinta mashruuca lagu dhisayo Waddada Hanti-wadaag, waxaana uu intaa ku daray in ka maamul ahaan ay la shaqeyn doonaan howlwadeenada howshaasi wada.
Duqa maqaalada Muqdisho Mudane Xasan Maxmed Xuseen “Mungaab” oo dhagax dhigay Waddada ayaa sheegay in tani ay qeyb ka tahay mashruucyada dib u habeyn lagu sameynayo waddooyinka.
Mashruca Laamiga lagu saariyo Waddada Hanti-wadaag Degmada Warta Nabada ee maqaalada Muqdisho ayaa waxa si aad ah u soo dhaweyay bulshada halkaasi ku nool, oo dhib weyn ku qabay bur burka Waddada